ललितपुर महानगरपालिकाको भवन मापदण्ड
जग्गा खरिद गर्दा, घर बनाउँदा र नक्सा पास गर्दा बुझ्नु ध्यानन दिनुपर्ने कुराहरु
इन्जिनियर्स नेपाल | माघ २९, २०७६, काठमाडौं
ललितपुर महानगरपालिका भित्र भवन निर्माण गर्न तपसिलमा व्यवस्था गरिए बमोजिम प्रकृया गर्दा सहजता हुन्छ ।
नापी शाखाबाट प्राप्त हुने प्रमाणित ट्रेस नक्सा र मालपोतबाट प्राप्त हुने लालपुर्जाको प्रतिलिपीसहित सर्वप्रथम तपाईले नक्सा शाखाको अमिन ईकाईमा सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस इकाइबाट प्रस्तावित वाटो (GLD) र क्षेत्र (zone) निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
प्रति जग्गा सँग जोडिएको÷नजोडिएको र नदिनाला भएको / नभएकोबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
प्रस्तावित बाटो भन्नाले नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकारले भविष्यमा विस्तार गरिने र साविक रहेको बाटो चौडा बनाउने भन्ने बुझिन्छ ।
यसको प्रस्तावित चौडाई निम्नअनुसार छन् ।
२ + २ = ४ मी ७ + ७ = १४ मी
३ + ३ = ६ मी १० + १० = २० मी
४ + ४ = ८ मी ११ + ११ = २२ मी
५.५ + ५.५ = ११ मी
अहिले फिल्डमा खुलिसकेको बाटो खुल्न बाँकी भएका GLD हरु, सो बाटोको केन्द्रबाट वा खुल्न बाँकीको हकमा दुई कित्ताबीचको सिमानालाई केन्द्र रेखा मानि दाँया र बाँया बाटोको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बराबर छाड्नु पर्ने हुन्छ । जसलाइ Right of way (ROW) भनिन्छ । अतः GLD ले के कति दूरी छाड्नु पर्छ र छाडि सकेपछी के कति जग्गा बाँकि रहनेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो बाटोको क्षेत्राधिकार ROW मा पर्नेगरी कुनै पनि किसिमको संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन ।
१.१.२ नदिकिनार बाट छाड्नु पर्ने दूरी
बागमति नदि – २० मी
नख्खु खोला – १२ मी
कर्मानाशा खोला – १० मी
माथि उल्लेखित दूरी साविक नापी नक्शामा भएको नदिको किनारा र हाल नदिको बहाबको किनाराबाट नापिने छ ।
मनपा भित्र विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्र छुट्याइएका छन् ।
क्षेत्रले मुख्यतया Coverage, FAR र संधियारतर्फको Set Back इत्यादीको बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।
तपाईको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा यी कुराहरु थाहा पाइनेछ ।
तपाईंको कित्ताभित्र अधिकतम कति क्षेत्रफल ओगटेर भवन निर्माण गर्न पाइन्छ भन्ने बुझाउँछ ।
१.४ FLOOR AREA (FA)
भुइँतलादेखी कति तल्लासम्मको भवन बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझिन्छ । सबै तल्लाको क्षेत्रफल जोडेर आउने कुल क्षेत्रफललाई FLOOR AREA (FA) भनिन्छ ।
१.५ अधिकतम उचाई :–
भवनको अधिकतम उचाई FAR तथा Light Plane को आधारमा निक्र्यौल हुन्छ ।
१.५.१ Floor Area = FAR X जग्गाको क्षेत्रफल
Floor Area= E(Ground floor + first floor + ……+….top floor (1) Floor Area अनुसार अधिकतम तल्ला बनाउन पाइने छ ।
१.५.२ Light Plane
H=2 x (ROW+2 x SET BACK)……………….(2) Light Plane अनुसार अधिकतम तल्ला बनाउन पाउने
FAR = क्षेत्र अनुसार छुट्याइएको गुणा गर्ने अंक
H = भवनको कुल उचाई
ROW = बाटोको क्षेत्राधिकार, (ROW) बाटोको क्षेत्राधिकार भित्र पर्खाल समेत निर्माण गर्न पाउने छैन ।
S.B = Set Back
बाटोको क्षेत्राधिकार (ROW) = २+२ = ४ मी
Set Back = १.५ मी
कुल उचाई (H) = २ x (४+२ x १.५) = १४ मी
भवनको कुल उचाई,
१) कुल फ्लोर एरिया (FLOOR AREA) र (२) Light Plane मध्ये जुन कम हुन्छ त्यही नै अधिकतम उचाई हो ।
ROW सँग समानान्तर हुने गरी थप जग्गा छाडी मात्र भवन बनाउन पाइने छ । यो दुरी क्षेत्रको आधारमा निक्यौल हुन्छ । आवासीय प्रयोजनको लागी न्युनतम दुरी १.५ मी हो । व्यापारीक प्रयोजन भए न्युनतम २ मी छाड्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सेटब्याक भनिन्छ ।
प्रस्तावित बाटो नभएको हकमा हाल कायम रहेको बाटोको अवस्था चौडाई र लम्बाईको आधारमा बाटोबाट छाड्नुपर्ने दूरी निक्र्यौल हुन्छ । ROW ३.०=१.५ +१.५ मी (केन्द्र रेखाबाट दाँया बाँया ) र १.५ मी S.B भवन निर्माण गर्न पाउनेछ । Set Back को चौडाई Zone र भवनको प्रयोजनअनुसार फरक–फरक कायम गरिएको छ । यो रेखाभित्र पर्ने गरी पर्खाल बनाउन पाइने छ ।
२. बाटोको अवस्था
२.१ गोरेटो बाटो र २०० मी लम्बाईसम्म म्भबम भलम Dead end (call-de-sac) भएको हकमा आफ्नोतर्फ केन्द्र रेखाबाट १.५ ROW र १.५ S.B गरी जम्मा ३ मी छाडी भवन निर्माण गर्न पाइनेछ ।
२.२ मोटरेवल र २०० मीभन्दा बढी तर Dead end भएको हकमा आफ्नोतर्फ केन्द्र रेखा बाट २ मी ROW + S.B छाडी भवन निर्माण गर्न पाइनेछ ।
२.३ सो भन्दा बढी र वारपार लाग्ने सडकको हकमा आफ्नोतर्फ केन्द्र रेखाबाट ३ मी ROW+S.B छाडी भवन निर्माण गर्न पाइनेछ ।
सडकको लम्बाई नाप्दा दुई बाटोहरु क्रस भई जक्सन भएको केन्द्रविन्दु वा GLD को केन्द्रविन्दु बाट नापिनेछ ।
8'0" सम्म वा सो भन्दा बढी चौडाईको बाटोलाई मोटरेवल बाटो मानिनेछ ।
माथिको विवरण प्राप्त भैसके पश्चात तपाईंको आफ्नो हकभोगको जग्गामा छाड्नुपर्ने दूरी, बाँकी रहने जग्गा, भूईमा ओगट्न पाउने क्षेत्रफल र कति तल्ला र कति उचाईसम्मको भवन बनाउन पाउनेछ भन्ने विवरणहरु सरल तरिकाले बुझ्नु हुनेछ ।
थप विस्तृत विवरणका लागि मनपाले जारी गरेका नक्शा दरखास्त फारम, भवन निर्माण मापडण्द २०६४ र वस्ती विकास मापडण्द २०७२, र यसको पहिलो संसोधन २०७३, र नेपाल भवन संहिता र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ बाट लिन सकिनेछ । साथै मनपाको नक्शा शाखामा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
मनपाले यही आ.व. २०७६÷७७ बाट पूर्ण रुपमा EBPS विद्युतीय प्रणालीबाट भवन नक्शा पास गर्ने प्रविधि लागु गरिएकोछ ।
यस प्रविधि अन्तर्गत तपाईंको सम्पूर्ण विवरण सहित कम्प्युटर प्रणालीबाट नक्शा दरखास्त फारम भर्नु पर्ने हुन्छ । यो कार्य नितान्त रुपमा तपाइको नक्शा बनाउने प्राविधिकमार्फत हुनेछ । आवश्यक सबै विवरण तपाईले उपलब्ध गराईदिई सकेपछि प्राविधिक विवरण र प्रशासनिक विवरण भरि Design Desk बाट मनपा को Registration Desk मा Forward गरिन्छ । जब मनपा ले उक्त तपाईको नक्शा दरखास्त फारम सहित सम्पर्कमा आउनु हुन्छ तब तपाइको प्राविधिकले पठाएको कम्प्युटर विवरण समेत भिडाई नक्शा पास प्रकृया अघि बढाइन्छ ।
३. नक्शा पास प्रकृयाका चरण निम्नानुसार छन् ।
चरण १: अस्थायी नक्शा पास ( DPC सम्मको लागि)
नक्शा दरखास्त – केन्द्रबाट
१५ दिने सूचना जारी – वडाबाट
प्राविधिक सर्जमिन प्रतिवेदन – वडाबाट
अस्थायी नक्शा पास ÷ वितरण – केन्द्रबाट
चरण २: स्थायी नक्शा पास ( DPC भन्दामाथि)
प्राविधिक फिल्ड जाँच÷प्रतिवेदन – वडाबाट
स्थायी नक्शा पास÷वितरण – केन्द्रबाट
चरण ३: निर्माण सम्पन्न प्रकृया (घर निर्माण पुरा भएपछि)
दरखास्त – केन्द्रबाट
स्वीकृत÷वितरण – केन्द्रबाट
यी सबै प्रकृया eBPS विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र हुनेछ ।
४. पास नक्शाको समय सीमा
४. १. अस्थायी नक्शा
पास भएको मितिबाट एक वर्ष हुनेछ ।
सो आवधिभित्र निर्माण हुन नसकेमा करको ५% रकम दाखिला गरी वढीमा ६ महिनाको लागि
एक पटक मात्र म्याद थप गरिने छ । म्याद थप अवधि भित्र पनि निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेमा करको सत्प्रतिशक (१००%) रकम
दाखिला गरी सकिएको मितिबाट थप हुने गरी अन्तिम एक पटकको लागि ६ महिनाको म्याद थपिनेछ । तत पश्चात पनि निर्माण हुन नसकेमा पुन शुरु बाटै नक्शापास प्रकृया गर्नु पर्ने हुन्छ ।
म्याद थपको निवेदन म्याद सकिनु आगावै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
म्याद समाप्त पश्चातको निवेदन कारबाही हुने छैन ।
नक्शा दरखास्त गरी दुई वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएकाहरु स्वतः खारेज हुनेछ ।
४. २. स्थायी नक्शा पास
पास भएको मितिबाट दुई वर्षसम्म बनाउन म्याद रहनेछ ।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा करको ५% रकम दाखिला गरि थप २ वर्षको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।
म्याद थपको निवेदन २ वर्ष समाप्त हुन अगावै दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । अन्यथा कारबाही हुने छैन ।
पहिलो २ वर्ष र थप २ वर्ष गरि कुल ४ वर्षभित्र नक्शा पास गरिएअनुसारको भवन निर्माण गरि निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिई सक्नु पर्नेछ ।
म्याद थप नगरिएमा शुरुको २ वर्ष र म्याद थप भएकाको हकमा ४ वर्षसम्म नक्शा पासको समयसिमा रहनेछ ।
तत्पश्चात भने निर्माण भैसकेको भाग छाडी बाँकी भागको म्याद समाप्त हुने हुँदा पुनः नक्शा पास प्रकृया गरि नक्शा पास पश्चातमात्र बाँकी भाग निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
४. ३. निर्माण सम्पन्न
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र आंशिक रुपमा पनि लिन सकिनेछ ।
निर्माण सम्पन्न प्राप्त आ.व. बाट तपाईंको सम्पत्ति कर लाग्ने छ ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएपछि मात्र सम्पत्ति कर तिर्न सकिने भएकाले समय भित्र भवन सम्पन्न गरि निर्माण सम्पन्न लिनुपर्ने हुन्छ ।
म्याद थप भएको हकमा ४ वर्ष, नभएको हकमा २ वर्ष भवन निमार्ण वर्ष मानिने छ र सोही आधारमा सम्पत्ती कर असुल गरिने छ । तर यस सिमा भित्र निर्माण सम्पन्न लिएको भए सोही आ.व. वाट सम्पत्ती कर लाग्नेछ ।
नक्शा पास बमोजिम समय सिमा भित्र घर निर्माण गर्न नसकेमा जति निर्माण गर्न सकियोत्यति घरको निर्माण सम्पन्न लिई बाँकी भाग रद्द गरी सम्पत्ति कर तिर्न सकिनेछ ।
भवन नक्शा नामसारीः–
भवनको नक्शा नामसारी मनपाबाट मात्र गरिनेछ ।
जग्गामा भवन बनाएको÷भएको अवस्थामा उक्त जग्गा अंशवण्डा वा खरिद बिक्रीबाट हक हस्तान्तरण भएको÷रहेको भने सो जग्गामा बनेको भवनको नक्शा समेत नामसारी गनुुपर्नेछ ।
मालपोतमा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा भवन जनाएको हकमा मात्रै नक्शा नामसारी गरिने छ । अन्यथा नामसारी गरिने छैन ।
अस्थायी नक्शा पास नामसारी हुने छैन, सरंचना बनाई रजिष्ट्रेशनमा उल्लखे भएमा मात्र नामसारी हुने छ ।
जति पटक हकहस्तान्तरण गरिन्छ त्यति नै पटक नक्शा नामसारी गर्नुपर्ने छ ।
पटक–पटक जग्गा हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा भवनको नक्शा पास लगायता नामसारी समेत भए÷नभएको जानकारी राख्नु पर्दछ । अन्यथा नामसारी नहुने अवस्था वा तपाईंभन्दा पहिलाका खरिदकर्ताको राजस्वसमेत एकमस्ुट दाखिला गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
जस्तो सुकै सरंचना बनाउन मनपाबाट नक्शा पास गर्नैपर्छ । अन्यथा दण्ड, जरिवाना तथा भत्काउने सम्मको कारबाहीको भागीदारी हुन सक्छ ।
नक्शा पास नगरी संरचना बनाउँदा भूकम्पीय सुरक्षाको प्रत्याभूितको ग्यारेन्टी गर्न नसकिनेहुँदा त्यस्ता प्रकृतिको सरंचनाको No Objection प्रमाण पत्र जारी हुँदैन ।
यस्ता प्रकृतिको भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र मा समेत No Objection प्रमाण पत्र जारी नभएको व्यहोरा उल्लेख गरिने छ ।
नक्शा पास नगरी बनाएका सरंचनाहरुको लाग्ने दस्तुरु तेब्बर असलु गरिने व्यवस्था रहेको छ । अतिरिक्त जरिवानासमेत लगाइन्छ ।
नक्शा पास नगरी निर्मित सरंचनाले भवन संहिता पालना नगर्ने भएकाले त्यस्ता सरंचनाको नक्शा पास हुँदैन र मनपाले जुनसुकै बखत भत्काउन सक्नेछ ।
तसर्थ यस्ता दण्ड जीरवाना र थप आर्थिक भारमा नपरौँ र नक्शा पास गरेर मात्र निर्माण कार्य थालौँ ।
नक्शा पास तपाईंको अधिकार हो भने मनपाको जिम्मेवारी हो । तसर्थ समयमै नक्शा पास गरिमात्र निर्माण कार्य थालौ ।
भवनको नक्शा प्लानिङ डिजाइन गर्दा मनपाबाट स्वीकृत प्रदान गरिएका इजाजत पत्र प्राप्त प्राविधिकहरुबाट गराउँदा सहज हुने छ । मनपाको website भित्र EBPS मा सूचिकृत डिजाईनरहरुबाट तपाईंले नक्शा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जग्गा खरिद गर्दा तथा भवन नक्शा प्लानिङ गर्नु अगावै मनपाको अमिन शाखाबाट सामान्य जानकारी लिनुहोला ।
नक्शा पास प्रकृया र त्यसको अवधिको जानकारी राख्नुहोला ।
समयभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरि भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुहोला ।
प्रत्येक आ.व. भित्रै सम्पत्ति कर बुझाई जरिवाना र झन्झटबाट छुटकारा लिनुहोला ।
नक्शा पास प्रकृया सम्बन्धी जानकारीका लागि आधिकारिक व्यक्ति वा मनपाको नक्शा शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।
तपाईंकै सहयोगमा मात्र नक्शा पास प्रकृयाको सेवा सर्वशुलभ् हुने भएकाले मनपा तपाईंको उपस्थितिको पूर्ण आशा राख्दछ ।
थप जानकारीका लागि मनपाको website www.imc.gov.np मा हेर्न सक्नु हुनेछ ।
अस्थायी नक्शा पास प्रमाणपत्र, स्थायी नक्शा पास प्रमाणपत्र र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र घर
धनी वा परिवार (नाता खोल्ने प्रमाणपत्र) लाई मात्र उपलब्ध गराउने छ ।
भवन निर्माण दरखास्तवालाको सुविधाको लागि मनपाले SMS मार्फत जानकारी गर्ने जमर्को गरेको छ ।
SMS– १ तपाईको डिजाइनरले मनपामा नक्सा दरखास्तको लागि पठाउँदा ः तपाईंको नाममा पेश भएको नक्शा फाईल महानगरपालिकाको Registration Desk मा पठाइएको छ ।
SMS– २ दरखास्तमा सच्याउनु पर्ने भएमा : तपाईंको नाममा पेश भएको नक्शा फाईलमा मापदण्ड र कागजात नपुगेकाले Designer लाई सम्पर्क गरि पुनः पेश गर्नु होला ।
SMS– ३ दरखास्त मनपाले स्वीकृत गरेको खण्डमा तपाईंको नाममा दर्ता भएको नक्शा फाईल वडा कार्यालयबाट महानगरपालिकाको नक्शा शाखामा पठाइएको छ ।
SMS – ४ प्रकृया वडाबाट गर्नु हुन तपाईंको नाममा दर्ता भएको नक्शा फाईल आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाइएको छ ।
SMS– ५ वडाको काम सकेर केन्द्रमा प्राप्त भएको तपाईको नाममा पेश भएको निर्माण सम्पन्न सम्बन्धी फाईल महानगरपालिकाको Registration Desk मा पठाईएको छ ।
SMS– ६ अस्थायी स्वीकृतीको जानकारी तपाईको नाममा दर्ता भएको नक्शा फाईल अस्थाई नक्शा पास भइसकेको छ । नक्शा शाखाबाट सङ्कलन गरि DPC गरेपछि पुनः स्थाईको लागि पेश गर्नुहोला ।
SMS – ७ स्थायी स्वीकृतीको जानकारी तपाईको नाममा दर्ता भएको नक्शा फाईल स्थाई नक्शा पास भइसकेको छ । नक्शा शाखाबाट सङ्कलन गर्नुहोला ।
यसको साथै भ्द्यएक् मा तचबअपष्लन को समेत व्यवस्था भएकाले तपाईले आफ्नो नक्सा पास दरखास्त बारे विस्तृत जानकारी आफ्नै मोबाइलबाट लिन सकिनेछ । थप जानकारीका लागि मनपाको नक्सा शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
इन्जिनियर्स नेपाल मासिक पत्रिकाबाट:
Feb. 13, 2020, 9:32 a.m.
One building one septic tank को अबधारणा अपनाऔं । जसले गर्दा भविष्यमा sewer Ko समस्या कम हूदै जान्छ ।
इन्जिनियर्स नेपाल | साउन ३२, २०७६
आइओइ इन्ट्रान्स रिजल्ट सार्वजनिक, सुनसरीका प्रतिक दहाल इन्ट्रान्स टपर
इन्जिनियर्स नेपाल | पुस २९, २०७६
काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड
इन्जिनियर्स नेपाल | जेठ ३२, २०७६
शक्तिशाली बन्दै इन्जिनियरिङ परिषद, लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने (विधेयकसहित)